အိမ်ထောင်ဘက်ရွေးတဲ့အခါ နေ့နံမတူလို့ စိတ်ညစ်နေသူများ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ - Barnyar Barnyar
အိမ်ထောင်ဘက်ရွေးတဲ့အခါ နေ့နံမတူလို့ စိတ်ညစ်နေသူများ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ
March 31, 2022 ခ်စ္ေရးခ်စ္ရာ 0
ကျနော် ငယ်ငယ်တုန်းက တက်ခဲ့တဲ့ အလယ်တန်း ကျောင်းရဲ့ ဘေးမှာ အစိုးရ သစ်စက်ဝင်းကြီး ရှိတယ်။ သစ်စက်ဝင်းရဲ့ အနောက်ထဲမှာ ဝန်ထမ်း တန်းလျားကြီး ရှိတယ်။ အဲဒီ ဝန်ထမ်း တန်းလျားမှာ ကျောင်းက သူငယ်ချင်းတွေ ရှိကြတော့ မကြာခဏ ရောက်ဖြစ်တယ်။
သစ်စက်ဝင်း ဝင်ပေါက်က လူတကာ ပေးမဝင်ဘူး။ အဲဒီတော့ တန်းလျားထဲကို သွားချင်ရင် ရထားလမ်းဘေး လူသွားလမ်းကနေ သွားရတယ်။ ရထားလမ်း ဆိုတဲ့အတိုင်း ကျူးကျော်တဲတွေ အများကြီး ရှိသလို ဝက်တွေလည်း ခြံခတ်ပြီး မွေးထားကြတယ်။
တရက်မှာ ကျွန်တော်လည်း သူငယ်ချင်းဆီ အသွား လမ်းတဝက်မှာ ဝက်သိုးကြီး တစ်ကောင်ကို ဂါလီပေါ်မှာ တင်လာတာ တွေ့ရတယ်။ ဂါလီ ဆိုတာ ဆိုက်ကားလိုပဲ။
ဒါပေမယ့် လူစီးဖို့ မဟုတ်ဘူး။ ပစ္စည်းတင်ဖို့ပါ။ ဝက်ပိုင်ရှင်ကလည်း ဂါလီဘေးကနေ လိုက်လာတယ်။ ရထားလမ်းဘေးက လူသွားလမ်းလေးကို ဂါလီကြီး တွန်းဝင်လာတော့ လူတွေတောင် သွားရလာရ ခက်ကုန်တယ်။ ဂါလီပေါ်က ဝက်သိုးကလည်း ငြိမ်ငြိမ် မနေတော့ ဂါလီလည်း ယိမ်းထိုးနေတာပါပဲ။ ဝက်ခြံတစ်ခု အရှေ့ရောက်တော့ ဂါလီ ရပ်သွားတယ်။ အဲဒီခြံထဲမှာက ဝက်မတစ်ကောင် ရှိနေတယ်။
လူတွေက ဝက်သိုးကြီးကို မနိုင်မနင်းဝိုင်းပြီး မကြတယ်။ ပြီးတော့ ဝက်မခြံထဲ ထည့်လိုက်တယ်။ အဲဒီလို ဝက်မင်္ဂလာဆောင် လုပ်ပြီးတော့ ဝက်ကလေးတွေ မွေးလာရင် ဝက်သိုးပိုင်ရှင်လည်း အချိုးကျ ဝေစုရတယ် ဆိုပဲ။
ဟိုတလောက အမေရိကားမှာ နေတဲ့ အစ်ကိုတစ်ယောက် ရန်ကုန်ပြန်ပြီး ဇနီးလောင်း ရှာတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း နီးရာနီးရာ စပ်ကြဟပ်ကြပေါ့။ ညီဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော့်ဆီကိုလည်း အကူအညီ လှမ်းတောင်းလို့ ဝိုင်တီယူက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ ညီမနဲ့တောင် ချိတ်ပေးလိုက်သေးတယ်။
ဓါတ်ပုံတွေ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေ တောင်း၊ ဟိုဘက်ရော ဒီဘက်ရော အီးမေးလ်တွေ ပို့ပေး၊ ကြားထဲက ငထွားခါးနာရပြီး အလုပ်တွေတောင် များကုန်တယ်။ အားလုံး အိုခေပြီ ဆိုတော့ ကိုယ်တော်က ရန်ကုန်ဆင်းပြီး လာကြည့်တယ်။ သူလည်း သဘောကျတယ်တဲ့။ ဒါပေမယ့် ဆင်ပြောင်ကြီး အမြီးကျမှ တစ်ပါလေရော။
အမေရိကားမှာနေတဲ့ သူ့အဖိုးက ကန့်ကွယ်တယ်တဲ့။ မိန်းခလေးက ခွေးနှစ်ဖွားဖြစ်လို့ မကြိုက်ဘူးတဲ့။ အဖိုးကြီးရဲ့ ချွေးမတစ်ယောက်လည်း ခွေးနှစ်ဖွားပဲ။
အဲဒီချွေးမက ရန်လိုပြီး ဟောင်ဖွာဖွာ လုပ်တတ်လို့ ခွေးနှစ်ဖွား မယူရဘူး ဆိုပြီး ဖုန်းဆက် တားပါလေရော။ အဲဒါနဲ့ အဲဒီ ဇာတ်လမ်းလေး ပလုံသွားတယ်။ အဲဒီ ဇာတ်လမ်း ပလုံသွားတော့ နောက်ထပ် ဇာတ်လမ်းတစ်ခုကို အမျိုးတွေက စီစဉ်ပေးကြတယ်။ ရန်ကုန်က ဟိုတယ်ပိုင်ရှင်တစ်ယောက်ရဲ့ သမီးနဲ့ ချိတ်ပေးတယ်။
ဟိုတယ်ကို သွား၊ ညစာတွေ စား၊ စကားတွေ ပြော၊ အိုခေ စိုပြေလို့။ မိန်းခလေးကလည်း ချောပါတယ်။ ပညာတတ်လည်း ဖြစ်တယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ဘုံကျောင်းမှာ စာသွားချတော့ အဲဒီတစ်ယောက်ကို ယူရင် မိသားစုထဲက အသက်ကြီးကြီး ခြေနှစ်ချောင်း ထွက်ပါမယ်ဆိုလို့ တပ်ခေါက်သွားရတယ်။
အသက် ၈၀ ကျော် သူ့အဖိုး သေမှာစိုးလို့ မယူရဲတော့ဘူး တဲ့။ ဒီမိန်းခလေးကို မယူပဲ တခြားတစ်ယောက်နဲ့ ယူလည်း အသက်ကြီးကြီး ခြေနှစ်ချောင်းက ထွက်ချိန်တန်ရင် ထွက်မှာပဲလေ။ ဘာတွေ အယူသီးနေကြလည်း မသိဘူး
ကျွန်တော် ရန်ကုန်ကို ဖေဖော်ဝါရီလ ပြန်တုန်းက အိမ်မှာလည်း မာမားနဲ့ စကားစပ်မိရင်း ဓမ္မာသောက အင်းဝရာဇာအကြောင်း ငြင်းကြသေးတယ်။ အိမ်ထောင်ဘက် မဖြစ်ရဘူးဆိုတဲ့ မွေးရက်တွေ အကြောင်းပေါ့။
ကျွန်တော်က အယုံအကြည် မရှိကြောင်း အဆို တင်သွင်းတော့ မာမားက သိပ်သဘောကျပုံ မရဘူး။ ရှေးထုံးလည်း မပယ်နဲ့ ဈေးသုံးလည်း မလွယ်နဲ့ဆိုပြီး ပြောနေသေးတယ်။
ကျွန်တော်လည်း ချက်ကျလက်ကျ ဖြေရှင်းချက် မထုတ်နိုင်သေးတော့ ဆက်ငြင်းမနေတော့ဘူး။ ရန်ကုန်မှာရှိတုန်းက လမ်းမတော်ဘက်ကို ရောက်သွားရင်း သရက်တော ကျောင်းတိုက်ဘက် သွားလိုက်တယ်။ အဲဒီ ကျောင်းတွေမှာ ဒေါက်တာဘွဲ့ရ ဆရာတော်တစ်ပါး သီတင်းသုံးနေပါတယ်။
ဆရာတော်က အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာပြု တက္ကသိုလ်မှာ ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူးပါ အဲဒီတက္ကသိုလ်က မရမ်းကုန်း စွယ်တော်ဘုရားနားမှာ ရှိပါတယ်။ ဆရာတော်ကို ဦးချ ကန့်တော့ပြီး စိတ်ထဲမှာ ကျလိကျလိ ဖြစ်နေတဲ့ ဓမ္မာသောက အင်းဝရာဇာ အကြောင်းကို မေးလျှောက်လိုက်တယ်။
ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ အိမ်ထောင်ဘက်ကို ဘယ်လို ရွေးရမလဲပေါ့။ ဆရာတော်က မိန့်တော်မူတယ်။ အိမ်ထောင်ဘက် ပါရမီဖြည့်ဘက်ဆိုတာ အတော်ကို အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုပါ ဒါပေမယ့် ဓမ္မာသောက အင်းဝရာဇာ ဆိုတာ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ မပါပါဘူးတဲ့။
ပါရမီဖြည့်ဘက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြတ်စွာဘုရားရှင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး ဟောတော်မူခဲ့တာက… သမ္မာသတ္တ၊ သမ္မာစိတ္တ၊ သမ္မာသီလ ဆိုပြီး အကြောင်းအရာ ၃ မျိုးနဲ့ ပြည့်စုံရမယ်တဲ့။
သမ္မာသတ္တ = တူညီသော ယုံကြည်မှု ရှိရမယ်…သမ္မာစိတ္တ = တူညီသော စိတ်နှလုံး ရှိရမယ်…သမ္မာသီလ = တူညီသော အကျင့်ဖြူစင်မှု ရှိရမယ်… အဲဒီ ၃ မျိုး တူညီပြည့်စုံရင် ပါရမီဖြည့်ဘက် ဖြစ်ပြီတဲ့။
လောကမှာ လင်မယား ၄ မျိုး ရှိတယ် ဆိုတာကိုလည်း ဆရာတော်က ဟောသေးတယ်။ နတ်သားနဲ့ တူသော လင် လူသေနဲ့ တူသော မယား၊ လူသေနဲ့တူသော လင် နတ်သမီးနဲ့ တူသော မယား၊ လူသေနဲ့တူသော လင် လူသေနဲ့ တူသော မယား၊ နတ်သားနဲ့တူသော လင် နတ်သမီးနဲ့ တူသော မယား၊
နတ်သားနဲ့ တူသော လင် ဆိုတာ လင့်ဝတ္တရားတွေ ကျေပွန်ပြီး မယားအပေါ်မှာ စောင့်ရှောက် ဖေးမ ကြင်နာတဲ့ ယောကျာ်းကို ဆိုလိုတာပါ။ နတ်သမီးနဲ့တူသော မယားဆိုတာ မယားဝတ္တရားတွေ ကျေပွန်ပြီး ခင်ပွန်းအပေါ်မှာ ချစ်ခင် ကြင်နာ ဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့ မိန်းမကို ဆိုလိုတာပါ။
လူသေဆိုတာကတော့ လူသေကောင်လိုပဲ ချစ်ခင် ကြင်နာမှုတွေ မရှိ၊ ဘာတစ်ခုမှ မလုပ်ချင် မကိုင်ချင်၊ အပျင်းတွေ တစ်ပြီး ဝတ္တရားတွေ လစ်ဟင်း နေတာမျိုးပါ။
ဒါကြောင့် လူသေ လင်မယားမျိုး မဖြစ်စေပဲ နတ်သား နတ်သမီး လင်မယားမျိုး ဖြစ်အောင် ကျင့်ကြံနေထိုင် အားထုတ်ရင်လည်း အိမ်ထောင်ဘက်ကောင်းတွေ ဖြစ်ကြမှာပါပဲတဲ့ ဆရာတော် ဟောပြလိုက်တော့လည်း အိမ်ထောင်ဘက် ရွေးတဲ့ကိစ္စ ရှင်းသွားတာပဲ။
မှုန်ဝါးဝါး မြင်ကွင်းတွေ ကြည်လင်သွားတယ်။ မာတာမိခင်ကို ပြေလည်ချေပ လမ်းပြဖို့ စကားအနှစ်တွေ ရလိုက်တယ်။ တစ်နေ့နေ့ တစ်ချိန်ချိန်မှာ အဲဒီဓမ္မာသောက အင်းဝရာဇာ အယူက ကျွန်တော့်ဘဝမှာ သပွတ်အူလို လာရှုပ်နေနိုင်တယ်။
နေ့မတည့် နံမတည့်ဆိုတာကြီးကြောင့် ချစ်ရဲ့နဲ့ ဝေးခဲ့ရတဲ့ ချစ်သူတွေ ဘယ်လောက်များ ရှိကုန်ပြီလဲ။ တချို့ အယူအဆတွေဟာ သေသေချာချာ ဂဃနဏ မသိပဲ လေသံကြား ဖမ်းတရားနာ နေကြတာပါ။
အဲဒီတော့ ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးတွေကို ခံရတာပေါ့။ ကျွန်တော့်အလှည့်မှာတော့ အဲဒါကြောင့် ဝေးရတယ် ဆိုတာမျိုး လုံး၀ အဖြစ် မခံနိုင်ပါဘူး။
ဒါကြောင့် အခုကတည်းက သေချာရှင်းလင်းအောင် မေးမြန်းထားတာ ပေါ့ကွယ်။ လောလောဆယ်တော့ အမေရိကားက အစ်ကို မြန်မာပြည်ပြန်ပြီး မိန်းမ ရှာနေရတာကို မြင်တော့ ကျွန်တော့် မျက်စိထဲမှာ ဝက်သိုးကြီးကို ပိုတော်တယ်လို့ မြင်မိလာတယ်။
အစ်ကိုခင်မျာ… ဝက်ပျိုမတွေ ရှိတဲ့ ခြံတွေကို ဂါလီကြီးစီးပြီး သွားနေရပေမယ့် ရည်မှန်းချက် မရောက်ရှာဘူး။ ငယ်ငယ်တုန်းက မြင်ခဲ့တဲ့ ဝက်သိုးကြီးနဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင် သူက ညံ့နေသလားပဲဗျာ။ အဖြေက ရှင်းရှင်းလေးပါ။ ဝက်တွေက အယူမသီးဘူးလေ။
credit to Ko Myo Thu
ေအဘရာမိုဗစ္ခ်္ၿပီးရင္ ေနာက္တစ္ေယာက္က မန္စီတီးသူေဌးလား ? နယူကာဆယ္သူေဌးလား ?
သင္ဟာ အိုေသြးအမ်ိဴးအစားပိုင္ရွင္ဆိုပါက မျဖစ္မေန သိထားသင့္ေသာအခ်က္မ်ား